एक झुप्पा अंगुरको मूल्य १२ लाख !
एजेन्सी । फलफूलहरुमा सर्वाधिक लोकप्रिय मध्येको एक हो अंगुर । यसको स्वादलेमात्रै होइन यसको सजावलटले पनि यसको लोकप्रियता अलग छ ।
तर, अंगुरको मूल्य कति सम्म पर्न जान्छ तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? जापानको एक शहरमा २४ वटा अंगुर रहेको एक झुप्पा रातो अंगुरको मूल्य झण्डै १२ लाख नेपाली रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । उक्त अंगुरको झुप्पालाई एक जापानी कम्पनी ‘ह्याकुराकुसो’ले खरीद गरेको हो ।
जापानमा यो रुबी रोमनको नामले चिनिन्छ । स्वादमा एकदमै मीठो र रसिलो हुने यो अंगुर शुभकार्यको प्रयोजनका लागि तथा बिजनेसको प्रमोसनमा गिफ्ट दिने गरीन्छ । जापानमा यस अंगुर एकदमै कम मात्रामा पाइन्छ । १२ वर्षअघि यो प्रजातिको अंगुरको विकास ‘इसिकावा’ प्रान्तको सरकारले गरेको हो ।